Anne Hemeda: Ny lesoko momba ny fahamendrehana · Global Voices teny Malagasy
Anne Hemeda: Ny lesoko momba ny fahamendrehana
Voadika ny 13 Jolay 2019 7:59 GMT
Efa mpamaky mpankafy efa nandritra ny taona maro aho raha nanomboka ho mpandika teny mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny Global Voices. Lahatsolatra tselatra nosoratan'i Rami “Lesona momba ny fahamendrehana avy any Syria” ny lahatsoratra nadikako voalohany.
Tena gaga aho rehefa nijery ny fandikako teny voalohany rehefa hitako fa lahatsoratra tselatra ilay izy satria tena namintina tsara ny dikan'ny Global Voices ho ahy izany ary ny hoe hatraiza ny fomba nanovany ny fiainako . Mazava ho azy fa nampahatsiahy indray ahy ihany koa ny faharetan'ny fotoana amin'ny fiaretana sy ny tolona ataon'ny olom-pirenena any Syria izany …
- niato nandritra ny fotoana fohy -
Miresaka momba an'i Syria: Misaotra betsaka an'i Marcell! Nandona ny foko ny teninao. Faly tokoa aho nandika ny taratasinao ho amin'ny teny Alemà. Tiako ny vazivazinao sy ny famariparitanao miavaka sy tsotra dia tsotra ary hatramin'izao dia mbola mandika ny taratasinao anaty tsikitsiky eny amin'ny endriko sy ny ranomasoko hatrany aho.
Ary iray amin'ireo antony nifandraisako tamin'ny Global Voices ihany koa i Syria …. mba hisolovava ireo feo tsy heno, mba hiaro ny fahalalaham-pitenenana sy hiady amin'ny sivana. Nahita olona be herimpo sy nanolo-tena maro aho izay nitondra anjara biriky tamin'ny fandraisana anjaran'ireo olom-pirenena sy hahatonga ny fiarahamonina hampiaty. Tsikaritro kokoa ankehitriny ny feon'ireo olona tsy misy mandre ireo ary lasa nanjary nampihetsi-po ahy kokoa ireo feo tsy re tao amin'ny fampitam-baoavo mahazatra malaza.
Tena resy lahatra tanteraka aho fa tokony hanomboka ny fanovana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika tsirairay avy isika eo amin'ny fiainana andavanandro raha tiantsika ny hanatratrarana ny fanovana eo amin'ny sehatra ara-politika. Mahaliana ahy ny vondrom-piarahamonin'ny global voices noho ny fomba fifandraisana mangarahara izay tsy misalasala mihitsy manolotra adihevitra momba ny olana amin'ny famoaham-baovao sy ny fizotry ny fanovana anatiny ao amin'ny YouTube.
Niaraka tamin'ny fandikana voalohany ny lahatsoratra “Lesona momba ny fahamendrehan'ny olombelona” no nanombohako ny lesona momba ny fahamendrehana tato amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices, izay tonga ary mbola mitoetra ho iray amin'ireo traikefa fianarana nahafa-po indrindra ho ahy.